Cristiano Ronaldo oo xalay barbareeyey xiddigii abid ugu goolasha badnaa kulammada caalamiga ah ee Ali Daei – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo xalay barbareeyey xiddigii abid ugu goolasha badnaa kulammada caalamiga ah ee Ali Daei
Haaruun June 24, 2021
(Yurub) 24 Juun 2021. Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa xalay barbareeyey rikoorka xiddigii abid ugu goolasha badnaa kulammada caalamiga ah ee Ali Daei kaddib markii uu labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii dalkiisu uu barbaraha 2-2 la galay France, isla markaana uu ku gaaray wareegga 16-ka Euro 2020.
Weeraryahanka Kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo soo barbareeyey rikoorka laacibkii abid ugu goolasha badnaa heerka caalami, waxaana uu dhaafi doonaa haddii uu gool kale u dhaliyo qarankiisa Portugal.
36-sano jirkaan ayaa hal gool kale u baahan si uu rikoorka xiddiga ugu goolasha badan taariikhda ciyaaraha caalamiga ah kala wareego xiddigii reer Iran ee Ali Daei oo sanado badan ahaa laacibka goolasha ugu badan ka dhaliyey kulammada caalamiga ah, waxaana haatan labada ciyaaryahan ay leeyihiin min 109 gool.
CR7 ayaa xalay dhaliyey goolkiisii 109-aad ee dalkiisa Portugal, kaddib 176 kulan oo uu u saftay, waxaana uu keli ku noqon doonaa rikoorka laacibka ugu goolasha badan taariikhda ciyaaraha caalamiga ah haddii uu gool kale u dhaliyo xulkiisa.
Ronaldo ayaa dhaliyay shan gool wadar ahaan intii lagu guda jiray saddexdii kulan ee xulkiisa Portugal ee Group F, xulka xafidanaya koobkaan ayaa haatan wareegga 16-ka kula kulmi doonta Belgium 27-ka bishan June.
Ali Daei oo u dhashay waddanka Iran ayaa intii u dhaxaysay 1993 ilaa 2006 waxa uu xulka dalkiisa u dhaliyey 109 gool 149 kulan oo uu u ciyaaray, waxaana uu isaguna kala wareegay halyeygii reer Malaysia ee Mokhtar Dahari oo ciyaaraha ka fadhiistay sanadkii 1985-kii isagoo lahaa 89 gool.
Dahari ayaa isaguna waxaa rikoorka xiddiga ugu goolasha badan kulamada caalamiga ah uu kala wareegay laacibkii reer Hungary ee Ferenc Puskas oo sanadkii 1956-kii dhaliyey 84 Gool ka hor intii aanu ciyaaraha ka fariisan.
Belgium vs Portugal, England vs Germany & Isku aadka wareegga 16-ka tartanka Euro 2020 oo dhammaystiran
Waa kee xiddiga ay kooxda Liverpool kula soo wareegeyso 50 milyan oo ginni si uu beddel ugu noqdo booskii uu ka baxay Wijnaldum?